Shariif Xasan oo soo dhoweeyay digniinta loo jeediyay qaswadayaasha | Somaale.com
Shariif Xasan oo soo dhoweeyay digniinta loo jeediyay qaswadayaasha
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhoweeyay digniinta ay dowladda Maraykanka u dirtay qaswadayaasha ka soo horjeeda hannaanka Roadmap-ka ee la doonayo in looga gudbo xilliga ku-meel-gaarka.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho kaddib markuu dib ugu laabtay dalka ayaa uga mahadceliyay dowladda Maraykanka sida ay uga go’an tahay nabad ku soo celinta Soomaaliya.
Wuxuu tilmaamay in dowladda KMG ah ay raalli ka tahay la xisaabtanka cid kasta oo isku dayda in ay waxyeelleyso hannaanka dalka laga saarayo ku-meel-gaarnimada.
Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu beeniyay eedeyntii Bangiga adduunka ee la xiriirtay in dowladda KMG ah ay si qaldan u maamusho lacagta caalamka uu ugu deeqo Soomaaliya.
Kaaliyaha xogyahaha arrimaha dibedda ee Maraykanka Johnnie Carson oo shalay booqday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Maraykanka ay xayiraad dhanka fiisaha, safarka iyo lacagta saari doonto cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso qorshe howleedka dowladda Soomaaliya.
Somalia iyo Somaliland oo heshiis gaarey 0
Maamulka Puntland Somali oo ka digay weeraro Al-Shabaab ka geystaan inta lagu jiro sanad-guurada maamulkaas